Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihii Jaaliyadda JOKA oo si habsami ah u socda
Shirweynihii Jaaliyadda JOKA oo si habsami ah u socda
Shirwynihii 10aad ee Jaaliyadda Ogadeniya ee Koonfur Africa ayaa maalintii Labaad habsami uga socda magaalada Port Elizabeth ee Xarunta gobolka Eastern Cape halkaas oo ay isugu yimaadeen xubno badan oo isaga kala yimid qaar kamida gobolada wadanka Koonfur Africa.
Shirwaynaha Jaaliyadda ayaa lagaga hadlayaa Arimaha Jaaliyadda Iyo Doorka ay Qadiyada Ogadeniya ku leedahay Jaaliyadu Iyo istiraatijiyada Jaaliyadda ee Sanadka cusub. Shirweynaha oo bilawday Sagaalkii Subaxnimo ayaa soo xidhmay Shantii galabnimo waxaana shirka ka hadlay Xubno badan oo ka tirsan Jaaliyadda.
Shirweynaha oo socon doona Sedex maal-mood ayaa maanta qaybtii 2aad ee shirka la soo Afjaray waxaana Shirka warbixino sanadeed ko soojeediyay maamulkii Jaaliyadda ee Sanadkii ina dhaafay ee 2013. Qaybta Sedexaad ee Shirka ayaa Furmi doona Sagaalka Subaxnimo ee Barrito.
Warbixin sanadeedkii ay Xubnaha Maamulku ka soo jeediyeen goobta ayay dhamaan xubnihii ka sooqayb galay shirka aad ugu riyaaqeen.
Faah Faahin dheeraad ah Dib ka fillo.